‘बुगी वुगी’ को उपाधी कविता नेपालीलाई, पहिलोपटक गुरुसँगै मिडियामा देखिएकी कवितालाई प्रियंकाको के कुराले मन छोयो ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘बुगी वुगी’ को उपाधी कविता नेपालीलाई, पहिलोपटक गुरुसँगै मिडियामा देखिएकी कवितालाई प्रियंकाको के कुराले मन छोयो ? (भिडियो)
August 5, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Fashion 0
एपिवान टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको रियालिटि शो ‘बुगी वुगी’ को उपाधी कविता नेपालीले चुमेकी छिन् । त्यस्तै, प्रगती पुन र सरोज मोक्तान क्रमश दोस्रो र तेस्रो बन्न सफल भएका छन् । विजेता बनेपछि कविता निकै खुसी देखिन्थिन् । उपाधी जितेपछि उनी पहिलोपटक आफ्ना गुरुसँग मिडियामा देखिएकी थिइन् । उपाधी हात पारेको खुसीयाले कविताले आफ्ना गुरुसँग साँट्न पाउदा निकै खुसी समेत व्यक्त गरिन् । उनले गुरुलाई अगाडी राखेर डान्स सिक्न सुरु गरेदेखिनै गुरुप्रति भित्रैदेखि रेसपेक्ट आउने गरेको स्मरण समेत गरिन् । उनले कहिलेकाही घर जानुपर्दा गुरुले भित्रैदेखि मर्म बुझेर पकेट मनि समेत दिएको कुरालाई सम्झना गरिन् ।
उनले आफ्ना गुरुलाई भित्रैदेखि सम्मान गरेको बताईन् । आफ्नो गुरुले आफूमा भित्र लुकेको कुरालाई मिहिनेत गरेर बाहिर निकलिदिएकोमा निकै खुसी व्यक्त गरिन् । उनले प्रिंयंका कार्कीको मिहिनेत र संघर्ष आफूलाई निकै मन परेको भन्दै भविष्यमा प्रियंका म्याम जस्तै बन्न मन लागेको बताईन् । त्यस्तै, जज तथा नायिका प्रियंका कार्कीले कविताले एउटा इतिहिाँस निर्माण गरेको बताईन् । त्यस्तै, आफूहरुले पनि एउटा गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भएको बताईन् । कविताका गुरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म कविताका लागि हासो तथा खुसी साटेको र परिवारसँगै बसेर कविताका लागि सफल्ताको कामना गरेको बताए ।